दुई दाजु भाइ को भेट!
By सपनासंसार December 26, 2006
बुबा बडा मजा आयो! तपाइ हरु को यो अल्लारे उमेरको तिर्थ घुमाइ पनि रमाइलो भयो होला . म पनि आज भोलि तिर्थ यात्रा मा निस्केको छु। बिनोद को मा हिजो र आज दुई दाजु भाइ संगै बसियो अनि घुमियो पनि फोटो पनि खिचियो।नेपाल मा के घुमियो यसरि जो यहा घुमियो . बिनोद टन्न मोटायको रहेछ भुँढि को त कुरै नगर्औ,मोटो गैडा को भुडि जस्तो खालि खादो रहेछ अनि मज्जाले बसेको छ। रातो कार रहेछ.आफैले चलाउदो रहेछ! चस्मा लगाउदा ठ्याक्कै प्रधान मन्त्रि जस्तो देखिदो रहेछ। म पनि त के कम,कालो चस्मा लगायपछि त ठ्याक्कै भुबन के सि जस्तो देखिन्छु नि। फोटो हेर्नुहोला! भोलि फेरि लेख्छु।